ज्ञानेन्द्र ढुंगानाज्यू, 'तपाईं 'बोका'ले दाइं हुने भए राष्ट्र बैंक 'गोरु' किन चाहिन्थ्यो र ?
ARCHIVE, SPECIAL » ज्ञानेन्द्र ढुंगानाज्यू, 'तपाईं 'बोका'ले दाइं हुने भए राष्ट्र बैंक 'गोरु' किन चाहिन्थ्यो र ?
आफुलाई नेपाली बैंकहरुको नियामक संस्थाझैं मानेर नेपाल बैंकर्स एसोसीएसनले नेपाली बाजारमा बैंकको ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्ने 'कुचेष्टा' गरेको छ । नेपाली बांकीङ क्षेत्रमा के सहि र के गलत छुट्याउन र गलतलाई कारवाही गर्न बसेको नियामक संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ठाडो चुनौती दिँदै शुक्रबार नेपाल बैंकर्स एसोसीएसनले एनआइसी एसिया बैंकसँग अन्य बैंकले अन्तर बैंकिङ कारोबार नगर्न / नगराउन निर्देशन दिएको छ । जुन बैंकर्स एसोसीएसनको क्षेत्राधिकार बाहिर पर्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।
तर नेपाल राष्ट्र बैंक हुँदाहुँदै नेपाल बैंकर्स एसोसीएसनले जे गर्यो, त्यसको चौतर्फी मिस्रित प्रतिक्रिया आएको छ । तर अधिकांस बैंकरहरुले नै संघका अध्यक्ष समेत रहेका ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले व्यक्तिगत रिसइवी लिएर आफ्नो बैंक नेपाल बंगलादेश बैंकमा बिजनेश खस्किएको झोकमा यस्तो निर्णय लिएको बताईरहेका छन् । आफुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नै सम्झने गरी उनले जे गरे, त्यो क्षणिक आवेग र खुला बजार अर्थतन्त्रको विरुद्ध हो भन्ने कुरा कसै अगाडी पनि लुकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सीइओको कार्यकाल २ बर्ष तोकेको छ । सञ्चालक समितिले चाहेको खण्डमा अर्को एक कार्यकाल थपिने व्यवस्था छ । तर अन्त जागिर नपाउने भएपछी सञ्चालकको चाकडी गरेर तेश्रो कार्यकालमा पनि सीइओ बनेको आरोप लागेका ढुंगाना यसअघि पनि थुप्रै विवादमा परिसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको जागिर छोड्दा होस्, वा उनको विदेशको बसाईंको विषयलाई लिएर होस्, उनी जहिले पनि विवादमै छन् । आफु विरुद्ध समाचार लेख्ने पत्रिकालाई ब्ल्याक लिष्टमा राख्छु भन्नेसमेतको फुर्ती दिने उनी अरु थुप्रै प्रकरणमा परिसकका छन् । ती प्रकरणका बारेमा एक-एक गरी हामी समाचार प्रकाशित गर्दैछौं । हो ! यस्तो विवादित व्यक्ति बैंकर्स संघको अध्यक्ष हुनु नै नेपालीहरुका लागि दुर्भाग्य भयो । सीइओ भन्दापनि बैंकको प्रतिनिधि अध्यक्ष हुने भएकाले उनी बैंकर्स एसोसीएसनका अध्यक्ष बन्न सफल भएका थिए । तीनै विवादित व्यक्ति संघको अध्यक्ष भएपछी उनले अहिले राष्ट्र बैंकलाई नै चुनौती दिने काम गरेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
नेपाली बैंकले जे गरेपनि, के सहि के गलत भन्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । आफुचाहिं सहकारीभन्दा महँगो ब्याज लिएर जनता पिरोल्ने अनि अरु बैंकले निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिए भन्दैमा न्वारनदेखिको बल निकालेर सकेको गर्न खोज्ने ढुंगानाको यो प्रवृतिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपकर्तालाई अन्याय भएको तथ्य सबैलाई जाहेर नै छ । यस्तो बीचमा निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिने संस्थाविरुद्ध लाग्ने उनको कदम खेदजनक भएको अधिकांसको टिप्पणी छ । सिए पढेर आएका ढुंगानाले बुझ्नुपर्ने थियो 'खुला बजार प्रतिस्पर्धाको अभ्यास के हुन्छ' भनेर । तर उनले त्यसो गरेनन् । कुन बेला एनआइसी एसिया बैंकलाई 'ठोक्छु' भनेर बसेका उनले अन्तत बैंक विरुद्ध आफ्नो अख्तियारीको दुरुपयोग गरेको तथ्य सबैअगाडी छर्लंग छ ।
एनआइसी एसियाले गलत नै गरेको भए पनि एक पटक स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने थियो । एक पटक सचेत गराउनुपर्ने थियो । सचेत गराउने निर्णय गर्नुपर्ने थियो । तर छापामारले गोली चलाएको जसरी उनले जे गरे त्यो व्यक्तिगत रिस र उनको आवेगबाहेक केहि होइन भन्ने धेरैलाई थाहा छ । हुन त एनआइसी एसियाको प्रगतिदेखि डाहा गर्ने ढुंगाना एक्लै होइनन् । उनी लगायत केहि अरुको प्रगतिदेखेर डाहा गर्नेहरुले उनलाई उकासेको कुरा पनि संघको निर्णयले स्पष्ट पारेको छ ।
ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई अहिले सुझावबाहेक केहि दिन सकिंदैन । विदेशको पीआर बोकेर नेपाली बैंकहरुको संघमा बस्ने र दुरदराजमासमेत बैंकिङ पहुँच पुर्याउने बैंकलाई आफु केहि गर्न नसकेको पीरले अख्तियारीको दुरुपयोग गर्न छाडीदिए सबैलाई भलो हुन्छ । राष्ट्र बैंक हुँदा हुँदै संघले यस्तो हर्कत गर्न सुहाउदैन र मिल्दैन पनि । मिल्ने भए त संघले मनपरी गरे भइहाल्यो नि । भोलि संघले २० प्रतिशत ब्याज अनिवार्य रुपमा ऋणीसँग उठाउने भनेर निर्णय गर्यो भने के हुन्छ ? यसको जवाफ कसले दिने ? राष्ट्र बैंक किन चुप छ ? अनेकौं प्रश्नहरु उठेका छन् । तर संघले सबैथोक गर्न मिल्ने भए राष्ट्र बैंक किन चाहिन्थ्यो र ? उही पूरानो उखान छ नि, 'बोकाले दाइ हुने भए गोरु किन चाहिन्थ्यो ?' अहिले यो ब्याज प्रकरणमा संघ बोका र राष्ट्र बैंक गोरुको भूमिकामा छन् । अव ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई साझा प्रश्न, 'ज्ञानेन्द्र ढुंगानाज्यू, 'तपाईं 'बोका'ले दाइं हुने भए राष्ट्र बैंक 'गोरु' किन चाहिन्थ्यो र ?'
यी सामाग्री छुटे कि ?
ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको सेटिङमा बैंकर्स संघको यस्तो निर्णय, २७ बैंकले रोके एनआईसी एसियासँगको कारोबार !
टिप्पणी : प्रतिष्पर्धीलाई पछि पार्ने २ टेक्निक, 'कि आफु राम्रो गर्ने, कि प्रतिष्पर्धीको खुट्टा तान्ने' बैंकर्स संघले दोश्रो
EXCLUSIVE : बैंकर्स संघको निर्णय बाफिया विपरित भएको खुलासा ! (प्रमाणसहित)